किनमेल र मनोरञ्जन मास्को मा केन्द्र यसको मात्रा र विलासिता द्वारा मारा। तिनीहरूले प्रस्तुत बुटीक संग उत्पादनहरु को अग्रणी ब्रान्ड। नम्बर को आगंतुकों रोल दैनिक। एक राम्रो तरिकाले हरेक वर्ष सुधार सबै सोचा-बाहिर भित्री र सेवा को गुणस्तर। विशेष ध्यान वास्तविक व्यापार शहर, वास्तवमा, सेकेन्ड "भेगास" छ नेटवर्क, भुक्तानी गर्नुपर्छ। हालसम्म, यो मास्को शाखा मात्र दुई समावेश छ। यो 24 मी Kashira राजमार्ग को चौराहे मा 65-66-किलोमिटर रिङ रोड र "भेगास" मा "क्रोकस सिटी" छ। तेस्रो खोल्ने किनमेल केन्द्र को को Kuntsevo यो नेटवर्क को 2016 वसन्त लागि निर्धारित छ। तबसम्म हामीले पहिले नै प्राप्त गरेको छ विस्तृत लोकप्रियता सेकेन्ड "भेगास" Kashirka कुरा गर्नेछौं।
यो शाखा थियो खोलिएको धेरै पहिले भन्दा आफ्ना सँगी "क्रोकस शहर", र किनभने उहाँले थियो लामो प्राप्त योग्य "शीर्षक को" सबै भन्दा लोकप्रिय किनमेल र मनोरञ्जन केन्द्र शहर को मास्को। मल आगंतुकों 400 हजार वर्ग मीटर को विशाल क्षेत्रमा नेभिगेट गर्न अनुमति दिने, विषयगत चार सडकमा विभाजन गरिएको छ। को को सबै तल्लाहरु मा स्थित यो तिनीहरूलाई मदत नेभिगेसन सिस्टम स्पर्श स्क्रीन संग। यो पनि को सेकेन्ड "भेगास" एक लाभ छ। मास्को, को पाठ्यक्रम, शाब्दिक पूर्ण प्रतिष्ठानबाट यस प्रकारको, तर किनभने परियोजना विकासकर्ताहरूले थियो प्रयास गर्न आकर्षित धेरै ग्राहकहरु यहाँ। त्यसैले, मा क्षेत्र को किनमेल केन्द्र छ यसको आफ्नै पार्क र आइस स्केटिङ रिङ्क, पूर्ण फेसनदार बुटीक, उम्दा रेस्टुरेन्ट र सहज बस्ने क्षेत्रमा। र रात सडक "Ginza" पनि छ एक वाल्क को फेम, जो "चिन्ह" विश्व तारा। यो स्थान को सबै आकर्षण पछि छलफल गरिनेछ बारेमा थप जान्न।
जब तपाईं पहिलो किनमेल केन्द्र भ्रमण "भेगास" नजर तपाईं लगभग कमिला महसुस जसमा संस्था को मुख्य अविश्वसनीय मात्रा ड्र। दोस्रो, अन्तरिक्ष वैचारिक सडक zoning चाल एक झोला संग एक अद्वितीय डिजाइन। यो केन्द्र थप संगठित बनाउँछ र आगंतुकों को लागि खोज को कार्य सुविधा। तेश्रो, सेकेन्ड "भेगास" तीन बाली जोडती मा: बजारबाट सडक गर्न पूर्व जादु, गोल्ड सडक र फैशन एवेन्यू मा टोक्यो सडक Ginza र विलासिता युरोप को नियन रोशनी। यसबाहेक, तिनीहरूलाई अन्तिम 102 हजार वर्ग मीटर को सबै भन्दा व्यापक क्षेत्र छ। यसरी, होने एक मास्को सपिङ्ग मल मा भएको, तपाईं प्रमुख गल्लीहरूमा गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ संसारमा शहर, साथै सबै दुनिया भर देखि लुगा, सामान, स्मृति चिन्ह र गहने खरीद गर्न।
सडकमा बारेमा बिट
सेकेन्ड "भेगास" परियोजना विकासकर्ताहरूले स्पष्ट भएन जस्तै गर्न बर्बाद समय मा trifles: प्ले प्रत्येक विषयगत क्षेत्रहरु छ बस अचम्मको दायरा सामान र मनोरञ्जन। मा विपरीत गर्न आरामदायक वातावरण को पूर्वी बजार बजारबाट सडक, Ginza छ शाब्दिक पूर्ण जीवन। यहाँ तपाईं शानदार बुटीक, उत्कृष्ट अनुकरण चम्केको रात आकाश, र जहाँ तपाईं शो व्यापार को दुनिया को ताराहरूको autographs छुन सक्नुहुन्छ ख्याति को हिंड्न एक सेलिब्रिटी धन्यवाद जस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एक समयमा यो रबर्ट डी Niro, Milla Jovovich, मबी, एण्टोनियो Banderas, Dzhon Kyusak, कार्लोस Santana र धेरै अरूले भ्रमण थियो। तर सुन सडक बाट उत्पादनहरु एक वास्तविक रानी मा धन्यवाद एक शानदार फर, आभूषण बारी र उत्पादनहरु सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु, "रूसी सुन", "Bronnitsky आभूषण" Valtera, "दृढ», Galand, Princessa Jewerelly "साम्राज्य सूर्य को" आदि देखि हेर्न सक्नुहुन्छ । डी। यसबाहेक, महिला हुनुपर्छ निश्चित गर्न भ्रमण फेशन एवेन्यू, किनभने तिनीहरू यहाँ गरिनेछ सक्षम गर्न Replenish को दराज सामान देखि चिरपरिचित ब्रान्डहरु: केल्विन क्लेन, एच एन्ड एम, Terranova म्याक, Lacoste, Zara लेवी गरेको, साधारण, बरफ रानी, र अन्य।
अवकाश आगंतुकों लागि
जोडे एक्लै समय खर्च गर्न चाहने, र बस प्रेमीहरूको सधैं छ upscale रेस्टुरेन्ट सेकेन्ड "भेगास" मा एक महान समय हुन सक्छ। मास्को, को पाठ्यक्रम, गर्न सक्छन् घमण्ड अधिक शानदार प्रतिष्ठानबाट संग प्रसिद्ध शेफ, तर मात्र किनमेल र मनोरञ्जन केन्द्र तपाईं रमाउनुहोस् प्राच्य वातावरण गर्न बजारबाट सडक। यो पनि लुगा, कस्मेटिक्स, सामान र आभूषण, केही महिला बगालको कहाँ संग बुटीक को स्थान दर्जनौं फेला परेन। र मानिसहरू यो सडक मा furs र आभूषण को रूप मा आफ्नो मनपर्ने पत्नीहरू र प्रेमिकाहरुलाई लागि सबैभन्दा शानदार उपहार पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सानो पसलहरूमा र मिठाई, मसला, स्मृति चिन्ह, उच्च गुणस्तरीय चिया र कफी को पसलहरूमा, संसारको यो भाग को enchanting जादू को एक समग्र वातावरण सिर्जना हो किनभने यहाँ vaulted arches अन्तर्गत एक ठूलो समय र, पूर्वी संस्कृति को प्रशंसक छन्।
लागि connoisseurs को सिनेमा, प्रशंसक पपकर्न, र अन्य नाश्ता मा सेकेन्ड "भेगास" Kashirskoye खुला नाटकीय जटिल "Luxor" संग9कोठा, बारहरू, एक लाउंज र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा। को आगंतुकों सधैं यो कमेडी, रोमान्स वा रोमाञ्चक हुन कि, एक ठूलो विकल्प हुनेछ भनेर त्यहाँ नियमित अद्यावधिक मुग्ध पार्ने संगीतको। यो मनोरञ्जन र उत्तेजना को शहर हो कि एक वास्तविक भेगास, वातावरण सिर्जना गरियो। यो डिजाइनर समूह को भारी कार्यहरू परिणाम हो। तपाईं इच्छा रहने उत्कृष्ट अनुभव समय व्यतित यहाँ, विशेष गरी मा कम्पनी को प्रियजनहरूलाई वा मित्र। तपाईं जसरी रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने, एउटै भवन मा स्थित आकर्षण संग चरम पार्क, त्यसैले तपाईं सधैं फुर्सदको समय कसरी खर्च गर्न पाउनुहुनेछ।
विकासकर्तालाई को मनोरञ्जन मल "भेगास सिटी" कहिल्यै समाप्त हुनु गर्न अमेज यसको आगंतुकों। इनडोर किनमेल जटिल रूस मा पहिलो पटक 18-मीटर "रोटेपिङ्" र राखिएको थियो "गिरने को टावर।" साथै, यो यस्तो "आंधी", "उफौ" र "सुनामी", साथै 5-सोपानकृत अविश्वसनीय tangled Maze, stunningly व्यावहारिक सिनेमा 5D रूपमा चरम सवारी रोजगारी प्रदान गर्दछ। र लागि साना विशेष सुरक्षित छोराछोरीको पार्क तिनीहरूले प्ले र आमाबाबुको साथ व्यावसायिक डिभिजनका लामो hikes पछि आफ्नो अवकाश मा आराम गर्न सक्छन् जहाँ खुलेको छ। र सहज फर्नीचर र सुखद माहौल संग क्याफेहरू र बारहरू को भेगास पार्क क्षेत्र व्यापक दायरा नजिकै भोक प्राप्त गर्न जो व्यवस्थित। निस्सन्देह, छुट्टै मुद्दा नै केन्द्र एक यात्रा हो, र यसैले हामी विकल्प छलफल जारी, किनमेल केन्द्र "भेगास" प्राप्त गर्न कसरी।
प्राप्त गर्न "भेगास" व्यापार र मनोरञ्जन केन्द्र मा Kashira राजमार्ग SHOULD गो मा निःशुल्क शटल बस देखि नै कम्पनी भनेर रोक्दछ धेरै अंक को शहर। उहाँले 15 45 मिनेट को एक आवृत्ति संग चलाउँछ। Kashira राजमार्ग देखि 24-औं मी को चौराहे: तपाईं ट्याक्सी रुचि भने, भनिन्छ चालक एकदम को सेकेन्ड "भेगास" ठेगाना। निस्सन्देह, प्रयोग गर्दा सडक परिवहन सधैं विशेष गरी किनमेल र मनोरञ्जन केन्द्र प्रवेश मा, यातायात जाम को धेरै घण्टा मा प्राप्त गर्न एक जोखिम छ। एक स्टेशन "Domodedovo" - तर तपाईं सधैं किनभने सेकेन्ड मेट्रो नजिकै "भेगास" को, वैकल्पिक समाधान को लागि रोज्न सक्नुहुन्छ।
महिला पुरुष भन्दा बढी कमाउन: आनन्द सम्भव छ भने?
डिजाइनर आफूलाई: महिला को के प्रकार एउटा Emerald पोशाक छ?
Tyra बैंक: प्रसिद्ध मोडेल को उचाई र तौल। मापदण्डहरु Tyra बैंक आंकडा
Daario Naharis: क्यारेक्टरको चरित्र र अप्रत्याशित पुनरुत्थानको कथा
Userator: प्रणाली बारेमा प्रतिक्रिया। म कमाउन सक्नुहुन्छ?
को steppes र उनको गुण को soils। मरुभूमिमा माटो कस्तो?
को गोडा संयुक्त दुखाइ। कारण, लक्षण र सिफारिसहरू।
प्यूजिओट RCZ: अविश्वसनीय स्टाइलिश कार